ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Transcriptionists ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Transcriptionists ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized4မှတ်ချက်များ 930 views
Transcribe အမျိုးမျိုးသောအီလက်ထရွန်းနစ်သုံးပြီးသည်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆေးသမားကယ်တင်ခဲ့အစီရင်ခံစာများ, သတင်းအချက်အလက်ထင်မြင်ချက်များ addressing, အရေးပေါ်အခန်းလာရောက်လည်ပတ်သူ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံရိပ်သုတေသန, လုပျထုံးလုပျနညျး, အလုပ်ခွင်လည်ပတ်မှု, နှင့်ကျန်ရှိနေသောအကျဉ်းချုပ်. လုံးဝနားလည်လွယ်ကြောင်းအမျိုးအစားသို့အာဏာရှင်အကောင့်များနှင့်အပြောင်းအလဲအတိုကောက်. အဖြစ်မရှိမဖြစ်ပြင်ရန်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့မဟုတ်နှိပ်နှစ်ဦးစလုံးမျိုးအတွက်ထူးခြားတဲ့နှင့်အကဲဖြတ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အစီရင်ခံစာများပြန်လည်ပူးပေါင်း, သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံ.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများတစ်ရွေးချယ်ရေးရဖို့သတ်ပုံ, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်အဖြစ်, အမှန်တကယ်စမ်းသပ်မှု, အရေးပေါ်အခန်းလာရောက်လည်ပတ်သူ, လူနာမှတ်တမ်းများ, ဇယားအကဲဖြတ်, session တစ်ခု, သို့မဟုတ်အကျဉ်းချုပ်ဖယ်ရှား.
Transliteration များအတွက် Transcribe ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပစ္စည်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ, syntax, Lucid, မှန်ခြင်း, နှင့်သင့်လျော်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝေါဟာရများ.
homonyms အကြားရွေးချယ်ခွဲထားနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသုံးအနှုန်းများအတွက်ကှဲလှဲနှင့်တင်းတင်းပြောတတ်တဲ့ဝန်ခံ, အဘိဓါနျအကြောင်းပြောနေတာ, ဆေးဝါးသတင်းရင်းမြစ်, အဖြစ်ဇီဝြဖစ်စဉ်ပေါ်ရှိအခြားရွေးချယ်စရာ, ဖွဲ့စည်းမှု, ဆေးဝါး.
ပြုပြင်မွမ်းမံဘို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပုံပြင်များပြန်သွား, ထူးခြားသော, နှင့်ဝေဖန်မှုများနှင့်လျှပ်စစ်သို့မဟုတ် branded အမျိုးအစားအတွက် In-patientsA ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှတ်တမ်းများကိုမိတ်ဆက်များအတွက် doctoris.
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထုတ်လုပ်ရန်, ပေးစာယူစာ, စာရွက်စာတမ်းများ, ဝေဒနာသည်- စာရင်းအင်း, ကုသမှုဒေတာ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလေ့လာမှု, နှင့် admin ရဲ့ပစ္စည်းများ.
တစ်ဦး stenotype ယူနစ်ကို အသုံးပြု. သတ်ပုံကိုယူ, အတိုကောက်, သို့မဟုတ် earbuds နှင့်ကူးရေးပစ္စည်းကိရိယာများ.
file တွေကို access ကိုပံ့ပိုးပေးနဲ့အမူအကျင့်ဒေတာ entry ကို, ဆေးသမားသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်ကြောင်းဒေတာအတွက်နိဒါန်းအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. ထောက်ပံ့ဖိုင်တွေ.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်. ဖြေရှင်းချက်မေးမြန်းချက်’ ကြိုတင်မဲ, သမ္မာသတိဥပဒေများ၏န့်အသတ်အတွင်း.
ကို set up နှင့် directory များနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသတင်းအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆက်လက်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်က x ray ဘို့ကဲ့သို့စာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင်, စမ်းသပ်ခန်း, နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအစီရင်ခံစာများ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်းများ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလုပ်-ups, အကျဉ်းချုပ် entry ကိုနှင့်သက်သာရာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်.
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်အလုပ်ခွင်စီမံကိန်းများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး execute, inputting အပါအဝင်, အာမခံကတိတော်များကိုလုပ်နေတာနဲ့ဖြန့်ဝေ, အထွက်နှင့်အဝင်အီးမေးလ်ကိုကိုင်တွယ်, လုပ်ဆောင်နေသည်, နှင့်ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများကို run.
လူတွေကိုဆည်းပူး, အစီအစဉ်ကိုချိန်း, နှင့်တစ်ဦးချင်းဒေတာထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆက်လက်.
အလုပ်-related စာရွက်စာတမ်းများအတွက်အသိပညာ-နားလညျမှုအပိုဒ်နှင့်ပြင်ဆင်ထားစာပိုဒ်တိုများ Reading.
သူများတွေပြော၏တက်ကြွသော-နားထောင်ခြင်း-ပေးဝေနေတစ်ခုလုံးကိုအသိအမြင်, သငျသညျထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့်အချက်များကိုနားမလည်ဖို့အတှကျအခြိနျယူ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုတောင်းဆို, မှားဖြစ်ကြောင်းသာဓကမှာ mesmerizing မဟုတ်.
မစိုက် data တွေကိုဖော်ပြအခြားသူများ chatting-Talking.
critical အတွေးအခေါ်-လျှောက်ထားအကြောင်းပြချက်နှင့်ကောက်ချက်၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုဆိုတာတွေ့ရဖို့စဉ်းစား, ဒုက္ခမှအခြားရွေးချယ်စရာအခြားနည်းလမ်းသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
Active ကိုသင်ယူ-နားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်အနာဂတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှစ်ဦးစလုံးနှင့် ပတ်သက်. အသစ်သောအချက်အလက်များ၏ဖုံးကွယ်နှင့်.
ထိုပြဿနာကိုသင်ကြားရေးတငျပွမဟာဗျူဟာ-ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အလုပ်သမား teachingORinstructional နည်းစနစ်များနှင့်ကုသသင်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်ကိစ္စများကျွမ်းကျင်လာသောအခါ.
ကွဲပြားခြားနားသောရှေးရှေး၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-TrackingANDExamining ထိရောက်မှု, မိမိကိုယ်ကို, သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ကုစားလုပ်ရပ်များယူ.
အရှေ့တိုင်းဆန်-Active ကလူကို enable မဟာဗျူဟာများရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေန်ဆောင်မှုများ.
ဂီယာရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်း tools များနှင့်တာဝန် execute မှအလေးအနက်ထားလိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့မျိုး.
installation-ထည့်သွင်းခြင်းအစီအစဉ်များ, devices များ, cabling, သတ်မှတ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် Device များ.
အတော်ကြာအကြောင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်. programming-ထုတ်လုပ်ကွန်ပျူတာ packages များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-အကဲခတ်စမ်းသပ်မှု, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်လက္ခဏာများမှန်ကန်စွာဖျော်ဖြေကိရိယာလည်းမရှိသေချာစေရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်ကုန်အပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြောင်းကိုဝန်ဆောင်မှုအကို Maintenance-ပွုလုပျခွငျးနှင့်အခါ upkeep ဘယ်လိုလိုအပ်သောဖြစ်လာအဆုံးအဖြတ်.
မရှိမဖြစ်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချဖို့ Restoring-ပွငျ devices များသို့မဟုတ်စနစ်များ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-ပွုလုပျခွငျးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များစစ်ဆေးခြင်းများ, ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ်နည်းစနစ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့.
systems စနစ်၏မျိုးလုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်သောအရာကိုသုံးသပ်ခြင်း-ဆုံးဖြတ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်လမ်းတိုးတက်မှု, ဝေဒနာတွေက, နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဦးမည်.
အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု-ကိုင်တွယ်ခြင်းအခြားသူတွေ’ အခါသမယလည်းကိုယ်ပိုင်ယခုအချိန်တွင် oneis.
ကုန်ပစ္စည်းသတင်းရင်းမြစ်-မြင်နေနှင့်ဂီယာ၏သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုမှရယူ၏စစ်ဆင်ရေး, အဆောက်အ, နှင့်ပစ္စည်းများအထူးသဖြင့်အလုပ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်.
ဝန်ထမ်းအရင်းအမြစ်များ-အဆောက်အအုံ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, တွန်းအားပေး, သူတို့အလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ကလူကိုဦးဆောင်, task ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးရှေးရှေးကိုဖျောထု.
အကြီးတန်း High School တွင်အဆင့် (GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်း High School တွင်ညီမျှစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်)
ထက်ပိုပြီး 1 နှစ်, အဖြစ်နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်တာနဲ့အပါအဝင်
ဆုံးဖြတ်ချက် – 88.27%
အမိန့် – 80.24%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 93.76%
အခြားသူများအဘို့စိုးရိမ်ပူပန် – 86.82%
ယဉ်ကျေးမှုနေရာချထားခြင်း – 81.51%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 80.63%
ဖိအား Threshold – 86.62%
ဘက်စုံ / လွတ်မြောက်ရေး – 86.59%
တည်ငြိမ်ခြင်း – 95.97%
ရှုထောင့်မှအာရုံစူးစိုက်မှု – 94.98%
ကျင့်ဝတ် – 91.51%
လွတ်လပ်ခြင်း – 95.71%
တီထွင်မှု – 85.24%
စဉ်းစား – 82.90%
စုပြုံဖို့ဒီဇိုင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်မီးအစီအစဉ်များကို Install သို့မဟုတ် restore, စတိုးဆိုင်, နှင့်အဘို့အ PV- နွေးရေဖြန့်ဝေ …
ဧပြီလ 27, 2019 တွင် 3:08 နံနက်